Wax ka beddel Turpial si loogu xiro StatusNet | Laga soo bilaabo Linux
Sidii aan kuu sheegay ayaan ahay isticmaalka Kulul si loogu xiro server StatusNet in aan ka hirgalino shabakadeyda shaqada.
Ujeeddadu waxay tahay, mid ka mid beddelaadyada aan aadka u jeclaa ayaa ahayd Turubka, sharafteeda iyo isdhexgalka awgood, laakiin ima aysan siinin ikhtiyaarro qaabeyn dheeri ah, marka laga reebo inaan ku xirnaado Twitter horeba Identi.ca. Laakiin markaa waxaan ka fikiray: Turubka es Meel furan waxayna ku qorantahay Python run? Maxaa diidaya in wax laga beddelo si ay ugu xirmaan meesha aan doonayo?
Waxaan bilaabay raadinta oo waxaan helay feylkii aan u baahnaa, kaas oo ka kooban dookhyada Identi.ca en /usr/share/pyshared/turpial/api/protocols/identica/identica.py. Faylkaas khadadka kaliya ee i xiisaynayay waxay ahaayeen kuwan:
Dabcan kee baan wax ka beddelay, oo waxaan uga tagay sidan:
Diyaar. Waan keydiyey feylka (marwalba horey ayaan keydiyey) waana diley Turubka. Waxaan ku xushay marin Identi.ca, Waxaan dhigay xogtayda iyo voila !!!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Wax ka beddel Turpial si loogu xiro StatusNet
Ka taxaddar maxaa yeelay isla shaqada haddii ay arkaan inay ku jirto «er tweet» waxaad aadi kartaa meeshii aan horay u ogaanay ...
Hahaha haba yaraatee. Waxaan ku rakibnay nidaamkaas shabakadeyda ISP .. 😛
Waan ka xumahay inay tahay GTK ... haddii ay ahaan lahayd Qt waxaan jeclaan lahaa wax intaas ka badan 😉
Waxaa laga yaabaa inaan aad ugu faraxsanahay Choqok hehe ...
La mid ah TavK7. In kasta oo Hotot aanu xumaan midkoodna ...
Ambiance + Shucaac = Mawduuca Gtk Theme